High Tech Concrete Co.,Ltd မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ | MyJobs
၀င်ရန် မှတ်ပုံတင်ရန် အလုပ်တင်ရန်
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များစာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဆေးဝါး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ အလုပ်အကိုင်များထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးမှုပိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များလူမှုရေးနှင့် လုပ်အားပေး အလုပ်အကိုင်များလူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များသုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များဟိုတယ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု အလုပ်အကိုင်များအင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအစားသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များအရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးကြော်ငြာ ၊ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်းဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပညာရေးလုပ်ငန်းစွမ်းအင်လုပ်ငန်းဖျော်ဖြေရေး၊ ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် အားကစား လုပ်ငန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်းသတ္တုတူးဖော်ရေး ၊စွမ်းအင် နှင့် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေး လုပ်ငန်းလက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း တည်နေရာအားလုံးမန္တလေးရန်ကုန်မြန်မာပြည်အတွင်းနိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာမရွေး (အိမ်မှာလုပ်ရန်)
High Tech Concrete Co.,Ltd
အကြောင်း High Tech Concrete Co.,Ltd
High Tech Concrete Co., Ltd was founded in July 1997 at Thaketa Industrial Estate, Yangon. It supplied ready-mixed concrete to both government and private sector projects throughout Yangon such as commercial and residential buildings, federal government projects, bridge construction, public streets and general constructions. In 2004, the next batching and precast plant was established at the Shwe Pyi Thar Industrial Zone to meet the increasing market demands. It was the first private plant for prestressed precast in Myanmar.
High Tech Concrete Co., Ltd is also the first ISO certified company in ready-mixed concrete Industry in Myanmar. In accordance with the ISO 9001:2000 requirements,asound quality management system has been established in the organization to ensure high performance in operations.
Asamarket leader in construction materials industry, High Tech Concrete Co., Ltd manufactures and supplies ready-mixed concrete as well as provides related services to construction sites all over Myanmar.
The company’s portfolio includes over 54 medium to large projects for both private and public sectors in Myanmar. Market-oriented structure, effective management and skilled personnel has placed High Tech Concrete to take strong position and to build long-term relationship with his customers.
High Tech Concrete provides wide range of high quality concrete products such as low heat concrete, high durable concrete, high early strength concrete, waterproofing concrete, self-compacting concrete and retarding concrete. In addition, the company supplies concrete related products like concrete brick and pavers, piles, precast panel, color pebbles, pozzolan cement and exposed aggregates. It has established its first private plant for prestressed precast. Being the 1st ISO (9001:2000) certified company in ready-mixed concrete industry in Myanmar. High Tech Concrete will adhere to the principle of continuous evolvement to be more robust, sustainable and innovative to the emerging market.
0 အလုပ်များ တွေ့ရှိပါသည်။
ဤကုမ္ပဏီသည် ယခုအချိန်တွင် အလုပ်ခေါ်ဆိုနေမှုမရှိသော်လည်း အလုပ်အသိပေးချက်တစ်ခုဖန်တီး၍ ၎င်းတို့အလုပ်ခေါ်ဆိုသည့်အချိန်တွင် သိရှိနိုင်ပါတယ်။
သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အလိုက်ရှာဖွေခြင်း
ရှိ အခြားသော အလုပ်အကိုင်များကို အောက်တွင်နှိပ်ပြီး တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် အလုပ်ခေါ်စာများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သတ်သော သိမှတ်ဖွယ်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတင်းလွှာကို တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | အလုပ်ခေါ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီများ | လုံခြုံရေးမူ၀ါဒ | ၀ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ | ၀န်ထမ်းစီစစ်မှု ကတ်သလောက် |
ဤဝက်ဆိုက် သည် ကွက်ကီးများကိုအသုံးပြုနေပါသည်။
သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်ရန်အတွက် ဤဝက်ဆိုက်သည် ကွက်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဝက်ဆိုက်ကို အသုံးပြုချင်းဖြင့် အညွှန်းပြခြင်းကို တိုးမြှင့်ရန်၊ ဆိုက်အသုံးပြုမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ မားကက်တင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အ‌ထောက်အကူပြုရန် တို့အတွက် သင့်ရဲ့ စက်ကိရိယာထဲတွင် ကွက်ကီးများကို ထားရှိထားရန် သဘောတူပါသည်။ ပိုမို သိရှိရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွက်ကီး မူဝါဒကို ကြည့်ပါ။